Heshiis horudhaca oo laga gaaray dhexdhexaadintii beelihii ku dagaalamay dhawaan deegaanka Rako ee goblka Karkaar. – Radio Daljir
Heshiis horudhaca oo laga gaaray dhexdhexaadintii beelihii ku dagaalamay dhawaan deegaanka Rako ee goblka Karkaar.
Rako, Oct 18 ? Dadaallo nabadeed oo in muddo ah ay ku hawllanaayeen guurti-dhaqan oo reer Puntland iyo mas?uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland kana socday deegaanka Rako-raaxo ee gobolka Karkaar ayaa lagu soo waramayaa in is-faham mugleh laga gaaray, lana xalliyey in badan murankii colaadeed.
Faarax Maxamuud Ibraahim oo ah duqa degmada Rako ee gobolka Karkaar oo khadka taleefanka ugu waramay Radio Daljir ayaa sheegay inay meel-wacan marayso dhex-dhexaadintii beelihii ood-wadaaga ahaa ee ku dagaalamay deegaanka Rako ee gobolka Karkaar. Waxaana uu tilmaamay in la sameeyay guddi nabadayn ah si 25-ka bishaan Octobar dib la isugu soo laabto.
Duqa degmada Rako Faarax ayaa sidoo kale sheegay in deegaankaasi laga sameeyay xabad-joojin rasmi ah, xilligaan waxgaradkii iyo xubnihii dawladdu ay wali ku sugan-yihiin degmada Rako ee gobolka Karkaar.
Dadaalladaan nabadeed ayaa yimid kaddib markii dhawaan deegaankaasi uu ka dhacay iska-hor-imaad hubaysan oo u dhaxeeyey dad reer-guuraa ah oo wada deggan deegaanno ka mid ah degmada Rako-raaxo ee gobolka Karkaar, kuwaasi oo dhaliyey khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.